Samsung Galaxy S I9070 Advance 2.3.6 ကို Root ကြမယ် | IT Sharing Network
Samsung Galaxy S I9070 Advance 2.3.6 ကို Root ကြမယ်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ယခုမျှဝေပေးလိုတဲ့ နည်းလမ်းလေး က Samsung galaxy S advance 2.3.6 (GT-I9070) ကို root လုပ်မဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။
၁။ GT-I9070-root.rar ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပြီးကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဖြည်ထားပါ။
၂။ Odin3 v1.83.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို run လိုက်ပါ ဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ဖိုင်ထဲမှာ ပါပါတယ်။
၃။ ဖုန်းရဲ့ setting ထဲက Aplications -> Development and check USB Debugging and Allow mock locations. နှစ်ခုလုံးကို အမှတ်ခြစ်ပေးရမှာပါ။
၄။ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ စိတ်မချရင် ဘက်ထရီဖြုတ်ပြီးပြီးပြန်တတ်ပါ။ Download mode
ကိုဝင်ပါ့မယ်။၀င်ရမဲ့ ခလုပ်တွေကတော့ Volume Down + Home button + Power button ဖြစ်ပါတယ် ဖိထားပါ ခဏကြာရင် Download mode ပေါ်လာမှာပါ ပြီးရင် volume up တစ်ချက်နှိပ်ပြီးထားပါ။ပြီးလျှင် ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းကို usb cable နှိပ်ချိတ်လိုက်ပါ။
၅။ odin မှာ add ဆိုပြီး အ၀ါရောင်လေးပြောင်းသွားရင်ဖုန်းကိုသိပါပြီး။တကယ်လို့ မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ samsung usb driver နှင့် samsung kies ကို install ပြန်လုပ်ပါ။
၆။ odin ထဲက pit ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေးကို နှိပ်ပြီး ဖြည်ထားတဲ့ဖိုင်ထဲက GT-I9070_EUR_XX_8G_20111220_KL6.pit ဆိုတာလေးကို ထည့်လိုက်ပါ။
၇။ PDA ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ rootkernel.tar.md5 လေးကိုထည့်ထားပါ။
၈။ ဒီအဆင့်က အရေးကြီးပါတယ်။ အမှတ်တွေကို သေချာအောင် စစ်ဆေးပါ။ Re-Partition, Flash Lock, Phone EFS Clear, Phone Bootloader Update! ဆိုတဲ့နေရာက အမှတ်တွေကို ဖြုတ်ထားရပါ့မယ်။
Auto Reboot နှင့် F.Reset ဆိုတဲ့ အမှတ်နှစ်ခုတည်းကိုပဲ အမှတ်ခြစ်ရမှာပါ။
၉။ ပြင်ဆင်လို့ အားလုံး သေချာတယ် ပြီးသွားတယ် ဆိုရင်တော့ odin က Start ခလုပ်ကလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းက ခဏကြာရင် pass ဆိုပြီးတော့ reboot ကျသွားမှာပါ။
၁၀။ အမှတ်စဉ်(၄)ကနေ အမှတ်စဉ် (၉) ထိုပြန်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်လုပ်ရမှာပါ အဲဒီနေရာမှာ အမှတ်စဉ် (၇) မှတ်ထည့်ထားတဲ့ PDA ဆိုတဲ့နေရာ က rootkernel.tar.md5 ကို xxld1.tar.md5 ဆိုတဲ့ဖိုင်နဲ့ လဲပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာ မိမိဖုန်းရဲ့ setting ထဲက pda (or) build number ကိုကြည့်ပါ။ PDA ကိုကြည့်ရန်အတွက်ကတော့ ဖုန်းရဲ့ ဖုန်းခေါ်မဲ့ နေရမှာ *#1234# ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီးကြည့်ပါ။ မိမိဖုန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ xxxxx.tar.md5 ကိုဒေါင်းပြီးထည့်ရမှာပါ။ xxld1.tar.md5 ကိုတော့ နမူနာလုပ်ပြတဲ့ဖိုင်လေးပါ။ ထည့်ပြီးသွား ရင်တော့ ပထမ တစ်ခေါက်တုန်းက လုပ်သလိုပဲ start ဆိုတာလေး ကိုသာ ရဲရဲ နှိပ်လိုက်ပါ။ Root ဖုန်းဖြစ်သွားပါပြီ။
၁၁။ ပြီးလျှင် superuser.apk (or) supersu.apk ကိုဖုန်းထဲထည့် install လုပ်လိုက်ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပါစေနော်။